रेखा थापा विप्लव नेकपासँग किन निकट हुँदैछिन् ? सरकारमाथि गरिन् प्रश्न, सिके राउतलाई अंगालो हालेर जनता तर्साउन खोजेको हो ? – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २९, २०७५११:१६
काठमाडौं, २९ फागुन । नायिका रेखा थापा यतिखेर फुर्सदमा छिन् । उनी अहिले कुनै पनि चलचित्रमा आबद्ध छैनन् । फुर्सदको समय रेखाले सामाजिक सञ्जालमा समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक, विकृति विसंगतिविरुद्ध लेखिरहन्छिन् ।
केही समयअघि उनी सरकारले विदेशबाट फर्केर आउने नेपालीहरूको विभिन्न सामान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खोसिएपछि आक्रोशित बनेकी थिइन् । त्यसका लागि उनले आफू विरोध प्रदर्शन गर्न एक्लै एयरपोर्ट जाने चेतावनीसमेत दिएकी थिइन् । खासगरी रेखा सरकारका गतिविधिविरुद्ध सशक्त भएर लागेकी छन् ।
यसैक्रममा रेखा थापाले विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्धमाथि असन्तुष्टि जनाएकी छन् । सरकारले ‘विप्लव’माथि प्रतिबन्ध लगाई सिके राउतलाई अंगालो हालेर जनता तर्साउन खोजेको हो ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । बुधबार बिहान फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै नायिका रेखाले यस्तो असन्तुष्ट पोखेकी हुन् ।
फेसबुकमार्फत उनले सरकार कसले चलाएको भन्दै प्रश्नसमेत गरेकी छन् । विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले जबर्जस्ती युद्ध थोपर्न लागेको आरोप लगाएकी छन् । उनले लेखेकी छन्, ‘यो सरकार कसले चलाएको छ ? जबर्जस्ती युद्ध थोपर्न पो थाल्यो !! देशभक्त ‘विप्लव’ माथि प्रतिबन्ध र सिके राउतलाई अंगालो हालेर नेपाली जनता तर्साउन खोजेको हो ? प्रतिवाद हुने निश्चित छ ।’
रेखा थापाले विप्लवलाई देशभक्त भन्नुले उनी नेत्रविक्रम चन्दप्रति निकै नरम देखिएकी छन् । धेरैले रेखा विप्लवको पार्टी प्रवेश गरेको त हैनन् भन्ने आशंका गरेका छन् । उनले बनाएको ‘मलिका’ चलचित्रको निर्माता नरबहादुर कार्की विप्लव नेकपामा प्रवेश गरेकाले रेखा सो पार्टीसँग नरम भएको बताइएको छ ।
विश्वकै अनौठो तस्वीर ! जुन तस्वीरले तपाईलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ !
लोकसंगीतमा ब्याटल प्रचलन बढ्दै, फेरी आयो देउडा ब्याटल (भिडियो)
आफ्नो ज्यान दाउमा राखी ऐश्वर्या रायलाई अक्षय कुमारले यसरी बचाएका थिए, गर्छिन हरेक ठाउँमा अक्षयको प्रशंसा